Nhau - Iyo Yekupedzisira Kupeta Chair Kutenga Gwaro: Mhando, Zvishandiso uye Mabhenefiti Ekushandisa.
Iyo Yekupedzisira Kupeta Chair Kutenga Gwaro: Mhando, Zvishandiso uye Mabhenefiti Ekushandisa.
Mumusika weseti yezvigaro zvinopeta zvakanaka asi usingazive pekutangira?Mutungamiriri wedu kukupeta zvigaroinopa zvese zvaunoda kuti uzive usati watenga.
Kubva pamabhenefiti kubhizinesi rako kune sarudzo dziripo, heino gwara redu rakakura rekupeta macheya.
Chii chinonzi Folding Chairs?
Kupeta macheya akasiyana neakawanda marudzi emacheya aunowana akatenderedza hofisi.Dhizaini yavo, kunzwa, uye izvo zvavanovakirwa zvakasiyana zvakanyanya kune yakajairwa chigaro chehofisi.
Macheya ekupeta akagadzirirwa kushandiswa zvishoma, kuti agarwe kwenguva pfupi.Zvinhu zvakadai se ergonomics kana kunyaradza kwenguva refu kwevashandisi, hazvifungidzirwe mukugadzirwa kwavo - panzvimbo iyo vanosimbisa kushanda uye vanopa sarudzo yakareruka.
Kazhinji inotengwa yakawanda, macheya ekupeta anowanzo shandiswa munzvimbo dzakakura dzezviitiko semichato kana uko nhamba huru yevashandi inoungana kamwechete.Sezvinoratidzwa nezita racho, chigaro chekupeta chinogona kukurumidza kupetwa kuita saizi inogoneka uye kuiswa mudura.
Zvakanakira Kupeta Chair
Chii chinopetwa cheya kusangano rako?Heano matatu ezvakakosha mabhenefiti.
Chimwe chinhu chinoyevedza chechigaro chinopeta kugona kuzvipeta kana zvisiri kushandiswa.Mabhizinesi nezvikoro zvinozvishandisa kuita zviitiko kana magungano, zvisati zvapeta zvese zvakagadzirira kuchengetwa.
Macheya anopeta anokupa mukana wekuwana zvigaro zviri nyore zvemhando idzi dzezviitiko pasina kutora nzvimbo yakakosha munzvimbo yako yekuchengetera.
Kupeta macheya akagadzirirwa mapfupi stints.Iyo dhizaini saka inogona kubvisirwa kumashure kusiya chete zvakakosha zvinodiwa.Pasina zvinhu zvinodhura uye zvigadzirwa, mutengo wekupeta macheya unogona kunge wakaderera zvakanyanya pane wedzimwe nzira dzakawanda.
Hauzowani chigaro chinoshanda kupfuura chigaro chinopeta.Kwete chete iwe unogona kuapeta kure munzvimbo yako yekuchengetera kana kuabvisa kwechinguva kubva mukamuri kuitira kuti nzvimbo inogona kushandiswa kune chimwe chinhu, anogona zvakare kutakurwa.Kana iwe uchida zvigaro zvekushandisa pazviitiko zviri kure nehofisi yako kana chikoro, kupeta zvigaro ndiyo sarudzo yakakwana.
Uchishandisa ngoro yekupeta cheya, unogona kutakura zviri nyore akawanda emacheya anopetwa akaturikidzana zvakachengeteka muchikamu chimwe.Kunyangwe pasina ngoro, macheya ekupeta akareruka uye ari nyore kufamba-famba muhuwandu hukuru.
Mhando dzeMacheya Anopeta
Kune marudzi mashomanana akasiyana-siyana ekupeta chigaro pamusika - heino mhando huru yezvigaro zvekupeta uye izvo zvaunoda kufunga nezveumwe neumwe.
Pane zvinhu zvitatu zvakakosha zvinoshandiswa pachimiro chechigaro chinopeta;yekutanga isimbi.Iyo yakanyanya kusimba uye kazhinji inodhura zvinhu, yakasimba simbi chigaro cheya ingangogara iwe kwenguva yakareba kupfuura chero imwe mhando.
Zvinhu zvakasimba zvinovakwa kuti zvigare
Yakanakira kushandiswa kwemukati kana kunze
Inogona kushandiswa kakawanda pasina kukuvara
Inoita ngura kana ichinaya
Purasitiki chinhu chakachipa zvakanyanya pane simbi, saka marudzi aya ekupeta macheya anozonyanya kudhura.Nekudaro, neyakachipa yekuvaka inouya kushoma kusimba.Kufanana nesimbi, plastiki iri nyore kuchengeta yakachena sezvo nzvimbo dzinogona kudzimwa pasi mushure mekushandisa.
Huremu huri nyore kutakura
Kupusika zviri nyore kuti ugare wakachena
Inogona kushandiswa mukati kana kunze
Wood inopa chimwe chinhu icho zvese simbi nepurasitiki hazviiti - maitiro.Iyo yakanaka mhando yehuni kupedzisa imhando inoyevedza yechigaro chekupeta, ichivaita sarudzo yakanaka yezviitiko zvakaita semichato kana zvimwe zviitiko zviri pamutemo.
Premium kutaridzika uye kunzwa
Kuvaka kwakasimba kunaka
Mhando dzeKupeta Chair Padding
Macheya akawanda anopeta anouya neakavakirwa-mukati padding, achiwedzera chinhu chekunyaradza kune izvo zvingave zvakaoma, zvigaro zvisina kugadzikana.Kazhinji, vanouya mune imwe yemhando mbiri.
Mucheka Akagara Anopeta Chair
Chokutanga ijira.Rudzi urwu rwekufukidzira runoenda rwakakura pakunyaradza asi rinogona kunge risingakodzere kunze kuchipihwa mukana wekukuvadzwa kwemvura.
Yakanyanya kugadzikana padding
Inopesana nekushisa kwepamusoro
Tricky kuchenesa nekufamba kwenguva
Yakagadzirirwa mukati meimba
Imwe sarudzo painopihwa ndeye vinyl.Rudzi urwu rwepadding runounza zvakanakira nekuipira kana zvichienzaniswa nemucheka.Vinyl padding inogona kutorwa kunze, asi pamazuva anopisa zvakanyanya zvichange zvisina kugadzikana kugara.Vinyl zvakare iri nyore kuchengeta yakachena nekungoipukuta pasi.
Inogona kusagadzikana kana yaiswa mukupisa
Zviri nyore kuchengeta wakachena
Inogona kushandiswa kunze kana kushandiswa kwemukati chete
Kupeta Macheya Maintenance
Isai mari mune yakasimba, yemhando yepamusoro seti yemacheya anopetwa, uye anogona kuve akanaka kwemakore akati wandei ekushandiswa zvakanyanya.Kuti uwane zvakanakisa kwavari kwenguva refu, iwe unozofanirwa kuita mamwe ekutanga epagore kugadzirisa.
Gore rega rega, tarisa zvigaro zvako zvekupeta uye ona kana uchikwanisa kuziva chero chezvinotevera:
Kuchengetedza vashandi, vana vechikoro kana vamwe vashandisi vakachengeteka, iva nechokwadi chekugadzirisa chero kukuvara kunotevera kana kuunza imwe yekutsiva.Tichifunga nezvekusadhurisa hunhu hwekupeta macheya, haifanire kuve yakakosha mari kana iwe uchida kutsiva akati wandei ekupeta macheya gore rega.
Kupeta Zvigaro Zvingoro
Imwe yemabhenefiti akakosha ekupeta macheya kugona kuafambisa achitenderedza 'en masse'.Kuti uite izvozvo iwe unoda chigaro chinopeta ngoro.Kunyange pano, pane chisarudzo chekuita pane imwe yekutenga.
Kupeta Chair Inoturika Ngoro
Yakarembera yakatwasuka uye yakaturikwa mumhepo, aya akakwana kana iwe uchirongedza akati wandei emhando dzakasiyana dzemacheya aunoda kuchengeta akarongeka.Nemitsara yakawanda yekuturika macheya, unogona kutsaurira mutsara kune rudzi kana ruvara rwechigaro.
Izvi zvinobvumira macheya kuti aturikirwe akatarisa pasi mumurwi.Kubatsira kukuru kweizvi ndiko kureruka kwekurongedza sezvo vachingogona kuiswa pamusoro peumwe.Nekudaro, sezvo iyo stack inokwira inogona kuwedzera kuoma kuwana macheya ari pamusoro.
Kupeta Chair Yakamira Ngoro
Idzi ngoro dzinoisa macheya ako panzvimbo yakatwasuka, zvichibvumira kuti nyore kurongedza parutivi-ne-parutivi.Kusiyana nengoro yekuisa macheya, macheya akaturikidzana nenzira iyi ese akaiswa pahurefu hwakafanana.Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuwana zvigaro kana iwe uchida kuzvitora kubva mungoro.
Kupeta macheya akakosha, anochinja-chinja mazuva ese ekugara ayo bhizinesi rega rega rinogona kubatsirwa kubva.Uchishandisa gwara iri, unogona kuona zviri nyore macheya ekupeta akanakira bhizinesi rako, chikoro kana sangano.